लद्दाख भि’ड’न्तमा के चिनियाँ सेना पनि मा’रिएका हुन ? यस्तो छ वास्तविकता — Sanchar Kendra
लद्दाख भि’ड’न्तमा के चिनियाँ सेना पनि मा’रिएका हुन ? यस्तो छ वास्तविकता
एजेन्सी। चीन-भारत सीमा नजिक गल्वान उपत्यकामा जुन १५ मा २० भारतीय सैनिकको ज्यान जाने गरी भएको झ’ड’पमा आफ्ना दुई चिनियाँ सैन्य अधिकारी मारिएको खुलासा भएको छ। चीनले मारिनेमा एक कमान्डिङ अफिसर र बटालियनका अर्का अफिसर भएको स्वीकार गरेको छ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भने हालसम्म घटनामा भएको कुनैपनि हताहतीलाई स्वीकार गरेको छैन। जुन १५ भारतीय सेनाले आफ्नो दाबी गरिएको भू-भागमा चिनियाँ पक्षले निर्माण गरेको भौतिक संरचना भत्काएपछि दुबैपक्षबीच हिं’स्र’क झ’ड’प भएको थियो।
सार्वजनिक भाषण र वाक्पटुताका लागि कहलिएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पछिल्लो आफ्नै सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण आलोचित भएका छन् । शुक्रबारको सर्वदलीय बैठकमा मोदीको चिनियाँ सेना भारतीय भूमिमा प्रवेश नगरेको भन्ने भनाइलाई लिएर विपक्षीहरु र पूर्वकूटनीतिज्ञहरुले चर्को आलोचना गरेका हुन् ।
चौतर्फी विरोध र आलोचना भएपछि भारत सरकारले मोदीको बचाउ गर्दै भनाइलाई तोडमोड गरिएको दाबी गरेको छ । गत सोमबार साँझ लद्दाखको गलवान क्षेत्रमा भारतीय र चिनियाँ सैनिकबीच भएको झडपमा परी २० जना भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनाका सम्बन्धमा छलफल गर्न मोदीले नै शुक्रवार सर्वदलीय बैठक डाकेका थिए । बैठकमा मोदीले ‘पूर्वी लद्दाखको घटनाका सम्बन्धमा रक्षामन्त्री र विदेश मन्त्रीको कुरा सुने र प्रस्तुति पनि हेरेँ । न त उनीहरुले हाम्रो सीमामा पसेका छन् न त हाम्रो कुनै चौकी कसैले कब्जामा लिइएको छ,’ भनेका थिए ।
मोदीको उक्त भनाइलाई लिएर सबैतिरबाट आलोचना सुरु भएको हो । मोदीले शुक्रबारको सर्वदलीय बैठकमा राखेको भनाइप्रति विपक्षी दलदेखि पूर्वकूटनीतिज्ञसम्मले विरोध र आश्चर्य प्रकट गरेका थिए । उनीहरुले मोदीको उक्त भनाइ सरकारको यसअघिको अडानको खिलाफ भएको आरोप लगाएका थिए ।
हुन पनि भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले बुधबार चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँगको फोनमा कुराकानीमा चिनियाँ पक्षले भारततर्फको लाइन अफ एब्चुएल कन्ट्रोल (एलएसी) मा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने प्रयास गरेका कारण झडपको स्थिति सिर्जना भएको दाबी गरेका थिए । ‘चिनियाँ पक्षको भारतीय भूमिमा संरचना निर्माण गर्ने सुनियोजित र योजनाबद्ध कार्य नै हिंसात्मक झडप र मानवीय क्षतिका लागि जिम्मेवार छ,’ उक्त टेलिफोन कुराकानीका विषय समेट्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।
जयशंकरको उक्तको दाबीको ठीक विपरीत शुक्रबारको सर्वदलीय बैठकमा मोदीले धारणा राखेपछि बबाल सुरु भएको हो । विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पूवमन्त्री पी चिदम्बरमले शनिबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत यदि चिनियाँ सैनिकहरु भारतीय भूमिमा प्रवेश नगरेको भए झडप कुन ठाउँमा र सैनिकहरु कहाँ मारिए भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
‘यदि चिनियाँ सैनिकहरु भारतीय भूमिमा आएका होइनन् भने झडप कहाँ भयो । हाम्रा सैनिकहरु कहाँ मारिए ? यदि अतिक्रमण भएको छैन भने २० जना सैनिकहरुको बलिदान किन गरियो ?’ चिदम्बरमले भनेका थिए । त्यसैगरी भारतीय अनलाइन ‘द वायर’ सँगको कुराकानीमा पूर्वराष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शिवशंकर मेननले पनि मोदीको भनाइप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए । ‘अतिक्रमणका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीका भनाइ तथ्यहीन र भ्रामक छन् । यदि त्यसो हो भने किन र कहाँ हाम्रा सैनिकहरु मारिए ?’ उनलाई उद्धृत गर्दै द वायरले लेखेको छ ।
मोदीको शुक्रबारको भनाइप्रति सबैले आलोचना गरिरहेका बेला चिनियाँ विदेश मन्त्रालयबाट गलवान उपत्यकाका समबन्धमा जारी वक्तव्यले आगोमा घ्यू थप्ने काम गर्‍यो । भारत र चीनबीच लद्दाखको सीमावार्ती क्षेत्रहरु गलवान उपत्यका, तातो पानी र पांगगोंग छोमा विगतदेखि आमनेसामने हुँदै आएका छन् । त्यस क्षेत्रमा कोरिएको कृत्रिम सीमा एलएसी र त्यसको आसपासको भूभागको दाबीलाई लिएर यी दुई छिमेकीबीच विवाद हुने गरेको र बेलाबखत दुवै देशका सैनिकहरुबीच घम्साघम्सी पनि हुँदै आएको छ । यही क्रममा सोमबार राति दुई पक्षका सैनिकहरुबीच हिंसात्मक झडप भएको थियो । भारतले गलवान उपत्यकालाई आफ्नो दाबी गर्दै आएको थियो ।
तर, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयबाट शुक्रबार अबेर राति जारी विज्ञप्तिमा चिनियाँ पक्षले गलवान उपत्यका आफ्नो भूभागमा पर्ने दाबी गरेको थियो । ‘गलवान उपत्यका धेरै वर्षदेखि एलएसीको चिनियाँ भूभागमा रहेको छ । चिनियाँ सैनिकले त्यस क्षेत्रको गस्ती गर्दै आएका छन् ।
गत अप्रिलदेखि भारतीय पक्षले एकतर्फी रूपमा निरन्तर सडक, पुल र अन्य पूर्वाधार बनाउँदै आएको र चीनले धेरैपटक विरोध गरे पनि भारतीय पक्षले एलएसीमा थप अगाडि बढेको र परिस्थितिलाई भड्काउने काम गर्‍यो’ चाओ लिझाङनद्वारा विज्ञप्तिमा भनिएको थियो । लिझाङले शनिबार बिहान ट्वीटमार्फत त्यही कुरा दोहोर्‍याए ।
चिनियाँ पक्षबाट आएको पछिल्लो दाबीले मोदी सरकारलाई थप अप्ठ्यारोमा पार्‍यो । त्यसपछि सरकारले चिनियाँ दाबीको सम्बन्धमा प्रस्ट पार्नुपर्ने माग हुन थालेको थियो । विपक्षीहरुले मोदी सरकारमाथि गलवान उपत्यकामा चीनलाई जिम्मा दिएको समेत आरोप लगाउन थाले । ‘चीनले गलवान उपत्यकामा आफ्नो दाबी दोहोर्‍याएको छ । सरकारले तत्काल प्रस्ट पार्नुपर्‍यो । यसमा सरकारको भनाइ छ, के चीनको उक्त दाबी सरकारले अस्वीकार गर्छ ?’ चिम्दबरमले शनिबारको पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए ।
चौतर्फी रूपमा विरोध सुरु भएपछि शनिबार प्रधानमन्त्री कार्यालयले विज्ञप्ति निकाल्दै सैनिकहरुको मनोबल गिराउने नियतले मोदीको भनाइको तोडमोड गरिएको आरोप लगाएको छ । ‘हाम्रो भूमि अतिक्रमण गर्ने खोज्नेहरुलाई हाम्रो धर्तीका सहासी छोराहरुले उचित जवाफ दिएका छन्, म विश्वस्त पार्न चाहन्छु कि हाम्रा सेनाले सीमा रक्षाका कुनै कमी छाड्ने छैनन्,’ मोदीलाई उद्धृत गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साथै १६ बिहार रेजमेन्टका सैनिकहरुले आफ्नो ज्यानमा खेलेर चिनियाँ पक्षको अतिक्रमण गर्ने र संरचना निर्माणको प्रयासलाई असफल पारेको भनाइसमेत मोदीले राखेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यसैगरी बैठकमा मोदीले भारतको नक्सामै भारतीय भूमि प्रस्ट भएको र सरकारले एलएसीमा एकतर्फीमा हेरफेर हुन नदिने धारणा राखेको जनाइएको छ ।
गलवान उपत्यकामा चिनियाँ दाबीलाई लिएर विदेश मन्त्रालयले समेत विरोध जनाएको छ । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवद्वारा शनिबार साँझ जारी विज्ञप्तिमा गलवान उपत्यका क्षेत्रमा ऐतिहासिक रूपमै भारतको रहेको दाबी गरिएको छ । ‘गलवान क्षेत्रको वास्तविकता ऐतिहासिक रूपमा प्रस्ट छ । चिनियाँ पक्षबाट एलएसीका सम्बन्धमा अतिरञ्जित र गलत दाबी स्विकार्य छैन । यी दाबीहरु चीनको विगतको आफ्नै अडानका विरुद्धमा छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसअघि रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले पनि घटनाका सम्बन्धमा गरेको ट्वीटलाई लिएर आलोचना खेप्नुपरेको थियो । सिंहले बुधबार ट्वीटमार्फत गलवानमा सैनिकहरुको मृत्युबाट अत्यन्त दु:खी र ममार्हत बनाएको छ । हाम्रा सैनिकहरुले कतव्र्यपालनको क्रममा अदम्य साहस र वीरता देखाउँदै वीरगति प्राप्त गरेका छन्,’ सिंहको ट्वीटमा भनिएको थियो । तर, सिंहको ट्विटमा चीनको विरोध नगरिएको भन्दै कंग्रेसका पूर्वअध्यक्ष राहुल गान्धीले चर्को आलोचना गरेका थिए । उनले ट्वीटमार्फत एउटा भिडियो सन्देश जारी गर्दै रक्षामन्त्री सिंहले चीनका केही नबोलेर भारतीय सैनिकहरुको अपमान गरेको आरोप लगाएका थिए ।
यस्तै चीन र भारतबीचको लद्दाखमा भइरहेको तनाब र २० भारतीय सैनिक मा’रिएको घटनाबारे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि मुख खोलेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले भारत र चीनबीच जारी तनावमाथि निगरानी राख्दै मद्दतको प्रस्ताव पेश गरेका छन् । अमेरिकाले भारत र चीनबीच कुराकानी गरिरहेको ट्रम्पले बताएका छन् ।